Fandrosoana olombelona sy tontolon'ny teknolojia Dell | Martech Zone
Fandrosoana olombelona sy tontolo teknolojia Dell
Alahady, May 13, 2018 Douglas Karr
Raha nandinika ny haitao tamin'ny alàlan'ny loharanom-baovao mahazatra ianao dia mety hieritreritra fa ny fiara mizaka tena dia mamono olona, ​​ny robot no mandray ny asantsika ary ny teknolojia no mitarika antsika amin'ny fahaverezana. Amin'ny maha mpivarotra ahy, heveriko fa tena zava-dehibe ny tsy firaharahiantsika fotsiny ny fampiharana mpamono olona manaraka any, mila mandinika ny fiantraikan'ny haitao amin'ny fiainana sy ny fihetsiky ny mpanjifa sy ny orinasa isika.
Ny zava-misy momba Fanovàna dizitaly ny mifanohitra amin'izany no izy.
Andao atomboka amin'ny fiara mahaleo tena. Manohy ny lozam-piarakodia mahafaty ny olombelona, ​​mamono amerikana 3,287 XNUMX isan'andro. Tsy mamono ny fiara manan-tsaina… hamonjy ain'olona. Raha ny marina dia hanombatombana aho fa efa misy izy ireo. Teny an-dàlana ho any Dell Tech World any Las Vegas aho dia nanoratra fanamarihana iray teny an-dalana mamaritra ny sasany amin'ireny endri-javatra ny Chrysler Pacifica vaovao Nanofa aho. Tsy isalasalana fa ny fiasan'ny fizakan-tenan'io fiara io dia nampihena ny loza mety hitranga amiko mandritra ny diako 5,000 XNUMX kilometatra.
Mandray asa? Na dia manala ny filan'ny asa sasany aza ny fandrosoana rehetra amin'ny teknolojia, dia misy asa vaovao eto. Telopolo taona lasa izay, tsy nisy nieritreritra (ao anatin'izany ny tenako) fa hitantana maso ivoho nomerika ary hamokatra podcast ho an'ny orinasa iray izay nanomboka tamin'ny fivarotana solosaina natao an-trano tamin'ny garazy. Manana mpiara-miasa an'arivony aho nahazo onitra tsara amin'ny asa mbola tsy nisy am-polony taona lasa izay.
Mety ho vitsy an'isa aho raha ny resaka mandeha ho azy. Izaho dia pessimist izay mino fa tsy mandray asa ny mandeha ho azy; manala ny sakana mihoatry ny be izany. Ao anatin'ny vanim-potoana amin'ity fanazavana podcast, nitafatafa tamin'ny mpanorina ny DAQRI, orinasam-pampitomboana zava-misy izay natambatra ny lozisialy sy ny fitaovana amin'ny rafitra antsoina hoe Worksense.
Atambaro ny mpiasa mahay miaraka amin'ny sehatra AR toy ny DAQRI izay afaka manambara naoty, torolàlana, ary mampifandray anao amin'ny manam-pahaizana amin'ny fotoana tena izy aza… ary io mpiasa io dia mety afaka manao fikojakojana fisorohana sy fanitsiana amin'ny fitaovana mety tsy ananany fiofanana akory. . Noho izany, izany dia mety hanitatra ny fahafahantsika miasa fa tsy hisolo azy ireo.
Manjary mahomby ihany koa ny teknolojia. Ny fitomboan'ny tahiry, ny angovo computing ary ny taham-pamindrana data miaraka amin'ireo mombamomba ny herinaratra mihena be dia be dia manampy amin'ny fampihenana ny angovo isaky ny singa miasa fa tsy hampiakatra azy. Ary manampy antsika hanova indostrialy nentim-paharazana izay tsy noeritreretinay ho azo averina hateraka indray. Aerofarms, ohatra, dia mampiakatra ny voka-pambolena amin'ny 390% amin'ny alàlan'ny famindrana azy ireo ao an-trano, fandefasana jiro tsy mora, mora mirindra amin'ny vokatra tsirairay ary mampihena ny filan'ny rano 95%. Ny fambolena anaty trano dia mety hahatonga ny sakafo mahavelona ho takatry ny sain'ny olona rehetra eto ambonin'ny planeta.
Manohy mampitandrina ireo mpanjifako aho fa ao anaty onjam-piovan'ny teknolojia vaovao isika. Ny herin'ny kaonty tsy voatanisa, ny fifandraisana haingam-pandeha haingam-pandeha ary ny fitehirizana tsy misy fetra dia manokatra ny vavahady mankany fahaizana artifisialy, fianarana lalina, fianarana milina, fanodinana ny fiteny voajanahary, ary ny Internet-javatra.
Mbola tsy amidy? Vao tsy ela akory izay i Google dia namoaka ny demo nataony Google Assistant tokony hanova ny sainao izany. Eo am-piandohana i Google Assistant - manome torolalana amin'ny fitaovanao IoT hanokana fotoana ho anao. Ny fahasarotan'ireto fandrosoana ireto dia mety handevina ara-bakiteny ireo mpifaninana amin'i Google toa an'i Apple sy Amazon raha toa ka tsy maharaka. Na dia toa tsy mitombina aza izany dia tadidio fa ny olona tsy nieritreritra hoe Nokia sy Blackberry dia ho very ny fanjakany koa.
Tsy misy ho an'ny orinasa teknolojia fotsiny ny lesona, lesona ho an'ny orinasa tsirairay izany. Ny vokatra sy serivisy rehetra eto amin'ny planeta dia azo hatsaraina na soloina teknolojia theses. Ny orinasa rehetra dia afaka mamorona fifandraisana amin'ny mpanjifa tsy nisy teo aloha. Ny rafitry ny HVAC ao an-tranoko dia soloina herinandro vaovao miaraka amin'ny rafitra vaovao sy mahomby kokoa.
Raha manantena trano mangatsiaka kokoa sy volavolan-dalàna momba ny angovo ambany aho, ny fandrosoana lehibe indrindra dia ny fametrahan'ny orinasa rafitra termostat sy rafitra fanaraha-maso azo zahana. Ny rafitra dia misy fiantohana 10 taona… ary ny rafitra fanaraha-maso dia hampandre ny orinasako HVAC raha misy ny olana. Ity orinasam-panompoana ity izao dia manana fifandraisana mivantana 10 taona amin'ny mpanjifany amin'ny alàlan'ity sehatra ity - tsy mila sehatra hafa hanaovan-dry zareo spam ahy. Ity no rafitra fitazonana mpanjifa tsara indrindra, hatrizay. Ary amin'ny maha mpanjifa ahy dia raisiko ny fifandraisana!
Ilaina tokoa ny manomboka mieritreritra ny orinasanao momba ny fomba mety handraisanao sy hanjakanao ny indostria alohan'ny hahatongavan'ny orinasanao ho lasa tsy manadino.
Ny fiantraikan'ny fiarovana amin'ny Internet amin'ny SEO
Tratry ny Fetin'ny Reny!